ဒေသထွက် ကြောင်ပန်းစေ့၊ နေလှည့်စေ့နှင့် တောထန်းမြစ်ဥများကို တရုတ်နိုင်ငံမှ တိုင်းရင်းဆေး က - Yangon Media Group
ကျောက်ပန်းတောင်း၊ ဇွန် ၁၆
မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မှ ထွက်ရှိသော ကြောင်ပန်းစေ့၊ နေလှည့်စေ့အပြင် တောထန်းမြစ်ဥများကို တရုတ်နိုင်ငံက တိုင်းရင်းဆေးကုန်ကြမ်း အဖြစ်အသုံးပြုသဖြင့် အများအပြား ဝယ်ယူလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
”အရင်ကတော့ အလေ့ကျအပင်ဖြစ်ပါ တယ်။ အခုခြံနဲ့စိုက်တဲ့အပင်တွေပါ။ အခု ကြောင်ပန်းစေ့ ဆွတ်ခူးရောင်းချနေပါပြီ။ ဝင်ငွေလည်းရနေပါတယ်။ ကြောင်ပန်းစေ့အပြင် အရွက်ဆိုရင် ကြမ်းပိုးပေါတဲ့အိမ်တွေရဲ့ အခင်း အောက်မှာထားပေးရင် ကြမ်းပိုးသေတယ်။ အသုံးဝင်တယ်။ ပြီးတော့ နေလှည့်စေ့ကတော့ အလေ့ကျအပင်ပါပဲ။ ညောင်ဦးမြို့နယ်ဘက်က ဝင်တာပါ။ တရုတ်အဝယ်လိုက်တဲ့နောက် တစ်မျိုးက တောတောင်တွေမှာ မိုးရာသီမှာ အများဆုံးတွေ့ရပြီး တောထန်းမြစ်ဥကို တူး ယူရပါတယ်။ ပြီးတော့ ထန်းဥကို ပါးပါးလှီးကာ အခြောက်လှန်းပြီးရောင်းပါတယ်”ဟု ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်မှ ဒေသခံပွဲစား တစ်ဦးက ပြောသည်။
”ကျွန်တော်က တောထဲကို တောထန်း မြစ်ဥနေ့စဉ်ရှာဖွေပြီး ရောင်းပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေက တောထန်းဥအခြောက်တစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၅ဝဝ ကနေ ကျပ် ၂ဝဝဝ ကျော်ရောင်းရတယ်။ တစ်ပတ်ကို ကျပ် ၅ဝဝဝဝ ကျော် ဝင် ငွေရပြီးတွက်ခြေကိုက်ပါတယ်”ဟု ရောင်းသူ ဒေသခံ ကိုလှသောင်းက ပြောသည်။ ဈေးကွက်တွင် ကြောင်ပန်းစေ့တစ်ပိဿာ ကျပ် ၂ဝဝဝ၊ တောထန်းဥတစ်ပိဿာ ကျပ် ၁၅ဝဝ မှ ကျပ် ၂ဝဝဝ ပေါက်ဈေးရှိကြောင်း တရုတ်သို့တင်ပို့သူများကဝယ်၍ ဒေသခံစိုက်ပျိုးသူများတွက်ခြေကိုက်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။ ကျောက်ပန်းတောင်းမြို့နယ်တွင် တိုင်းရင်းဆေးဖက်ဝင် ပုဇွန်ဂမုန်း၊ အကြော်ပင်၊ ညော်ခံပင်၊ ဝဥ၊ ဆီးဝတ်ဆံ၊ ကြောင်လျှာစေ့၊ ခွေးလှေးယားစေ့၊ ဒန့်သလွန်စေ့ စသည့်အပင်များ အများဆုံးပေါက်ရောက်ကာ ပြည်တွင်း ပြည်ပမှ တိုင်းရင်းဆေးကုန်ကြမ်းအဖြစ် အသုံး ပြုလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
တရုတ်က ဒေါ်လာ ၅ဝ ဘီလီယံ တန်ဖိုးရှိ အမေရိကန် သွင်းကုန်များ အပေါ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း အခွန် တိုးမြှင
ရေများ ပြန်လည် မြင့်တက်လာသဖြင့် ထိုင်းကလေးငယ်များ ဂူအတွင်းပိုင်း ပေ ၆ဝဝ ခန့် နောက်ဆုတ်ခဲ့ရ?
ဆောက်လုပ်ရေးနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တော??